Nnwere onwe nnwere onwe: ofdị CMS Dị Iche | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 22, 2010 Sunday, June 28, 2015 Michael Reynolds kwuru
Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ nke oge a na-eji CMS (Content Management System) iji mee ka ndị na-elekọta webụsaịtị mee mgbanwe, biputere ọdịnaya, ma jikwaa weebụsaịtị. Nke a dị iche na ụbọchị ochie ị na-akpọ ụlọ ọrụ imewe gị ka ịmee mgbanwe, nke nwere ike ịdị oke ọnụ ma kpatara igbu oge na mmelite. Mgbe njikwa weebụsaịtị bụbu mpaghara naanị maka ndị nwere oke aka (mgbe ụfọdụ a na-akpọ "webmasters"), CMS na-emepe ikike na ndị na-abụghị teknuzu nke otu nzukọ, dịka onye isi ahịa ahịa, onye nchịkwa nchịkwa, ma ọ bụ ọbụna onye isi ọrụ.
At SpinWeb, anyị na-emepụta saịtị na Nnwere onwe nnwere onwe ikpo okwu. Nnwere onwe bụ CMS nke pụrụ iche ma nwee ụfọdụ ọmarịcha uru karịa ụfọdụ ndị egwuregwu ndị ọzọ. Indianapolis yiri ka ọ bụ WordPress obodo m na-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ya dịka ebe nrụọrụ weebụ. Onweghị ihe dị njọ na WordPress ma na nke m onye blog na saịtị na-ekwu okwu E wuru na WordPress. Agbanyeghị, Nnwere onwe nwere ụfọdụ uru dị iche iche ma a bịa n'iji ya eme ihe, omimi nke atụmatụ ya, yana nkwado. Ọ na-atọ m ụtọ na anyị bụ ndị pụrụ iche ma jiri Nnwere Onwe dị ka usoro nhọrọ anyị, ọkachasị maka ụlọ ọrụ buru ibu na-achọ karịa ka nyiwe ghere oghe nwere ike ịpụta.
Sistemụ Njikwa Ọdịnaya na Nkwado
Otu ihe dị mma gbasara Nnwere Onwe bụ na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu na-akwado ma lekọta ya Mbata. Enwere ndị otu raara onwe ha nye nke na-akwụ ụgwọ iji mepụta atụmatụ ọhụrụ, gbasaa modulu dị ugbu a, ma gbanwee nzaghachi ndị ahịa n'ime ikpo okwu nke na-enye ndị otu dị ike ikwukọrịta ozi n'ịntanetị. Accrisoft bụ nnukwu ụlọ ọrụ na mụ na CEO enweela ọtụtụ mkparịta ụka Jeff Kline banyere ọdịnihu nke ikpo okwu na banyere azụmaahịa dị n'ịntanetị n'ozuzu ya.
A na-achụpụ codebase nke nnwere onwe site na ihe nkesa dị n'etiti nke na-ahụ na ntinye ọ bụla na-agbanwe agbanwe. N'iji ọtụtụ nyiwe mepere emepe, ụdị ihe atụ bụ ịtọlite ​​weebụsaịtị 50 + dị iche iche na-eji nkwụnye ins, nsụgharị, na hacks dị iche iche wee bụrụ ihe nro iji chekwaa dị ka ụlọ ọrụ. Nnwere onwe na-enye SpinWeb ohere iji kwado ma debe ọnụọgụ weebụ na-enweghị njedebe na-enweghị nchegbu gbasara enweghị nkwekọ dị n'etiti ha. N'ihi na a na-akwado software niile n'ígwé ojii, ndị ahịa anyị enweghị mkpa ichegbu onwe ha banyere ịwụnye ngwanrọ na kọmputa ha. Ha nwere ike ị banye ma banye ọrụ. Tụkwasị na nke a, anyị nwere ike ịkwalite weebụsaịtị nke ndị ahịa anyị na nkeji nkeji mgbe ewepụtara ụdị ọhụrụ nke Freedom.
Pụrụ Iche Ntuziaka Ndị Ọrụ
Nnwere onwe nwekwara ezigbo njirimara ọrụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nyiwe ndị mepere emepe nwere ike ịme mgbagwoju anya na ndị ọrụ njedebe, Nnwere Onwe na-eweta ihu dị ọcha, dị mfe nke na-eme ka ọ dịrị ndị na-abụghị ndị ọrụ aka ike ijikwa weebụsaịtị ha.
Extensible modul maka Email, msdị, E-azụmahịa na More
Nnwere onwe na-enye ọtụtụ modulu dị ike nke jikọtara nke ọma na akụkụ ndị ọzọ nke weebụsaịtị. Dịka ọmụmaatụ, Nnwere onwe gụnyere ihe etinyere Email Ahịa modul, nke na-enye ndị nwe weebụsaịtị ihe ngwọta zuru ezu nke Email Marketing wuru n'ime weebụsaịtị. Ọ gụnyere ndebiri, ịhazi oge, njikwa ndebanye aha, na ọnụego nnyefe e wuru ozugbo. Ọ na-ewepụkwa data sitere na modulu ndị ọzọ ka ndị ahịa nwee ike izipu mkpọsa na ndepụta ndị sitere n'akụkụ ndị ọzọ nke saịtị ahụ, dị ka ndebanye aha ihe omume.
The Moduledị modul na Freedom dị oke ike ma na-asọpụrụ ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ n'ụdị taa. Na nnwere onwe, ndị na-abụghị ndị ọrụ nchịkwa na ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịmepụta ụdị mgbagwoju anya (ma ọ bụ dị mfe) maka ngwa, ndebanye aha omume, onyinye, ma jide njide niile na ịpị ole na ole. Enwere ike ịhazi ụdị data ahụ ma bupụ ya n'ọtụtụ ụzọ ma ọ bụ ọbụlagodi n'ime ụgbọ ibu azụmahịa maka ngwa ahịa e-commerce dị elu.
E wuru ya ụgbọ ibu azụmahịa na Freedom na-enyekwa ndị ọchụnta ego aka igbakwunye ihe ngwọta e-commerce jikọtara na weebụsaịtị ha ma ree ngwaahịa na obere mbọ. Nke a nwekwara ike ịgbatị na ntinye aha ihe omume, na-enye ndị otu ohere ịre ndebanye aha na ihe omume ma nabata kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ego ịntanetị elele.
Freedom nwere wuru na-modul maka Blọọgụ, Emume kalenda, Mgbasa Ozi, Pọdkastị, Mkparịta ụka, Akwụkwọ ndekọ, RSS, Mmemme Mgbakwunye, Billgba ,gwọ na Ntuli aka, ịkpọ aha ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ na sistemụ. Na mgbakwunye, imirikiti modulu nwere ike iwekọta na netwọkụ mmekọrịta na-eduga, nke pụtara na mmelite webụsaịtị nwere ike na-akpaghị aka na-akpaghị aka na Twitter, Facebook na LinkedIn.
Nnwere onwe bụ usoro echedoro kpamkpam. Ọ bụghị naanị na ọ bụ ngwa a nwalere nke ọma ma sie ike, mana ọ nwekwara njirimara njikwa njikwa ọtụtụ, nke na-enye ọtụtụ ndị njikwa webụsaịtị ọrụ dị iche iche na ọkwa nke nnweta. O nwekwara a Workflow modul, nke na-enye ndị ndezi ohere ịkwado ma ọ bụ jụ mgbanwe tupu ha adị ndụ.
Ebe ndị otu A na-ahazi
M ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na egosighi m nnwere onwe magburu onwe ya maka nnwere onwe nnwere onwe maka ụlọ ọrụ ndị otu, dịka mkpakọrịta. Nnwere onwe ndị otu nnwere onwe na-enye ndị otu otu ohere ijikwa nchekwa data zuru oke nke ndị otu ma nye ndị otu ahụ ohere idobe akụkọ ha ma mee mmelite site na webụ. Modul ahụ na-enyekwa ịgba ụgwọ ndị otu, CRM, ahịa na nkwukọrịta. Ndị ọchụnta ego nwekwara ike iji ya dịka nchekwa data ndị ahịa yana n’ezie nchekwa data ndị ahịa SpinWeb na sistemu ịgba ụgwọ na-achịkwa site na Freedom, zuru oke na akwụkwọ ozi email, ịgba ụgwọ ugboro ugboro, na ịkwụ ụgwọ ịntanetị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, otu nnukwu uru iji Nnwere Onwe bụ na ihe niile nọ n'otu ebe. Tupu anyị na anyị arụ ọrụ, ọtụtụ ndị ahịa anyị na-eji ngwaọrụ dị iche iche maka ịre ahịa email, e-commerce, ịde blọgụ, ndebanye aha mmemme, ọdịnaya weebụ, na njikwa ndị otu. Mgbe ha tụgharịrị na Nnwere Onwe, ha hụrụ ịdị mfe nke iji na arụmọrụ (ịghara ịkọwa ọnụ ahịa ego) nke ịnwe ihe niile n'otu ebe.
Sistem Njikwa Nchọgharị Kachasị Mma Injin
Nnwere onwe bụkwa ezigbo engine engine. Ebe nrụọrụ weebụ na-adabere na nnwere onwe na-eji "HURLs" (URL-mmadụ nwere ike ịgụ) nke pụtara na enwere ike ịdepụta ọdịnaya site na engines ọchụchọ karịa mfe. HURLs na-enyere aka bulite ogo weebụsaịtị na ntanetị ọchụchọ ma na-elekwa ụmụ mmadụ anya nke ọma karịa URLs ndị a na-eme ka nchekwa data dị na ọtụtụ sistemụ ndị ọzọ. HURLs in Freedom bụ nke a na-emezigharị.
Dị ka onye na-enye ikike inweta Solution Solution, SpinWeb nwere ike igbasa weebụsaịtị ngwa ngwa yana yana agbanwe agbanwe oge ọ bụla n'ihi ọkwa anyị na Freedom. Ndị ahịa anyị hụrụ udo nke ojiji, njikọta dị ike, yana ọkwa njikwa nke ha nwere ugbu a mgbe ha na-achịkwa weebụsaịtị ha.
Tags: ọnụnweere onwe yaCMSusoro njikwa ọdịnayaspinweeb
Ahụrụ m nnwere onwe CMS n'anya! Akwa post.